Hanka Cayaaraha iyo Carruurta Lixaadka La’ | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Hanka Cayaaraha iyo Carruurta Lixaadka La’
Hanka Cayaaraha iyo Carruurta Lixaadka La’
Posted by: radio himilo May 3, 2016
Indhaha caalamka iyo mucaashaqiinta kubadda cagta ayay indha qabad ku noqotay eegidda sawirkan muujinaya inan yar oo cuuryaan ah, weliba ku jira xero qaxooti oo Muqdisho ku taala oo misna doorbidaya kubadda cagta iyo dheelisteeda.
Muqdisho waa magaalo ay ku badan yihiin carruurta xiiseysa kubadda cagta dheelisteeda iyo daawashadeedaba, hayeeshee marka ay indhahaagu qabtaan inan yar oo cuuryaan ah misna baacsi ugu jira laadidda kubadda waxay ku siineysaa in hanka da’yartu uu yahay mid sareeya.
Kubadda cagta ayaa doorisay oo bedeshay nolosha kuwo badan oo ka soo jeeday qoysas reer tabareed ah, kuna soo barbaaray tuulooyin iyo deegaano muqaadaraadka iyo daroogadu ku badan tahay, dilka iyo fal danbiyeedyaduna caadi ka yihiin oo ku yaala waddamo badan oo dunida kamid ah sida: Brazil, Argentina iyo Colombia.
Quusasho la’aanta ayaana qaar badan baday inay magac, lacag iyo sharaf ku sameeyaan adeegsiga iyo dheesha kubadda cagta sida Carlos Teves, Sergio Aguero iyo Felipe Melo.
Qof kasta wuu riyoodaa, wuuna riyoon karaa, Hayeeshee joogteynta iyo ka dhabeynta riyadaa oo run sheeg iyo ruclo aan dhammaad laheyn looga dhigo gundhig ayaa horseeda guulaha nolosha.
Dhiiro gelinta bulshada iyo dadka nagu xeeran ayaa naga caawin karta gaaridda waxyaabo kolka hore u muuqan kara kuwo sameyntoodu caqliga aadanaha uusan qaadaneyn.
Bal eeg carruurta lixaadka la’ ee loolanka ugu jira dheesha kubadda cagta iyo kuwa lixaadkoodu u dhan yahay ee jecel dheelista kubadda haddii ay helaan garabsiin dhab ah oo bulshada uga timaad, qiyaas 20 sano kaddib maxay ku soo bixi karaan.
Hubaal Messi, Ronaldo iyo kuwo ka cajiibsan waa laga soo sari karaa carruurta Soomaaliyeed, xirfadlayaal indha qabad lehna waa ay ku jiraan.
Previous: Dhageyso: Warbixin ka hadleysa arday Jaamacadda Muqdisho dhigata oo tartanka iyo tababar uga soo qeyb galay Jasiiradda Qubrus
Next: Hordhaca kulan cayaareedka Heegan iyo Saxafi